विवाह: आधारभूत आवश्यकताहरु र नीतिहरू
निष्कर्ष र विवाह को समापन संसारको कुनै पनि देशमा मात्र होइन विशुद्ध कानुनी महत्व, तर पनि सम्वन्धि परम्परा र चलन को एक विशाल जलाशय छन्। सबै बावजुद परिवार एक प्रमुख सामाजिक संस्था रहिरहन्छ।
स्वैच्छिक, आदर बीच बराबर सम्बन्ध, ठीक सँगै डिजाइन मानिसहरू छ र महिला व्यक्तिगत र सम्पत्ति सम्बन्ध उत्पन्न, प्रासंगिक शरीर फारम - यो विवाह कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
विवाह रजिस्ट्रीमा कार्यालय बनेको छ। यहाँ यो तथाकथित भन्ने तथ्यलाई ध्यान आकर्षित गर्न आवश्यक छ धार्मिक विवाह रूसी कानून मा बस छैन, त्यसैले हामी विवाह गर्न चर्च जाने अघि, दम्पतीलाई रजिस्ट्री कार्यालय भ्रमण गर्न निश्चित हुनुपर्छ गर्दैन।
अन्यथा, आफ्नो वैवाहिक कानुनी रूपमा गर्दैनन् बुझे।
वर्तमान रूसी कानुन अन्तर्गत, विवाह सम्भव यदि छ:
1 दुवै दल आफ्नो सम्बन्ध दर्ता गर्न स्वैच्छिक सहमति व्यक्त। यस मामला मा, रूसी परिवार कोड मात्र विपरीत लिङ्गी विवाह गर्न अनुमति दिन्छ।
2. भविष्य spouses रूसी संघ हाल अठार वर्ष छ विवाहको उमेर, पुग्नुभएको छ। तर, यो तपाईं विवाहित र उमेर सोह्र मा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने टिप्पण लायक छ, तर यो आवश्यक छ एक असल कारण र आमाबाबुको सहमति।
साथै, जो अन्तर्गत विवाह निष्कर्षमा अवैध हुन सक्छ धेरै अवस्था छन्। पहिलो, यदि एक जोडीलाई (वा दुवै) पहिले नै विवाह को formalization छ। दोश्रो, यसले आमाबाबु र छोराछोरी, हजुरआमा (हजुरबुबा) र नातिनातिनी, साथै पूर्ण-blooded वा आधा भाइबहिनीहरू विश्वास गर्ने नजिक नातेदार, बीच असम्भव विवाह हो। तेस्रो, सम्बन्ध को formalization एक दुर्गम अवरोध कारण मानसिक विकार गर्न incapacitated को सम्भावित spouses एक को पहिचान हो।
हालैका वर्षहरूमा एकदम को निष्कर्ष मा साधारण एक विदेशी संग विवाह रूस मा।
हाम्रो देश को क्षेत्र मा एक विवाह प्रवेश गर्ने विदेशी, एकै समयमा हुनु हुँदैन र यसको आफ्नै नियम तोड्न: वहाँ एक धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
विवाहको समापन सन्दर्भमा, यसको लागि दुई मुख्य आधार कानुनी रूपमा एक जोडीलाई को मृत्यु रेकर्ड, र तदनुसार सजाया छ छोडपत्र। उत्तरार्द्ध, बारी मा, उत्पादन गर्न सकिँदैन वा प्रशासनिक (सूचना), वा कोर्ट द्वारा।
प्रशासनिक प्रक्रिया अवस्थामा कार्य को कारण मिति पछि spouses एक कैद सुनाइसकेको वा रूपमा अक्षम अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त भएको थियो, हराइरहेको रूपमा मान्यता छ जब। साथै, बिना एक परीक्षण विवाह गर्ने spouses कुनै सानो बच्चाहरु छन् भने बर्खास्त गर्न सकिन्छ, र तिनीहरूलाई बीच कुनै सम्पत्ति विवाद छन्।
अन्य अवस्थामा, वैवाहिक मात्र कोर्ट द्वारा भंग भएको छ। ती अवस्थाहरूमा जहाँ spouses आपसमा कुनै दावी छ संग सरल विकल्प सम्बन्धित छ, तर छोडपत्र को समयमा परिवार मा, त्यहाँ सानातिना छोराछोरी छन्। यस मामला मा, छोडपत्र प्रक्रिया तीन महिना भन्दा कम। सबैभन्दा ठूलो कठिनाई त्यहाँ सम्पत्ति को साझेदारी भन्दा विवाद हुँदा प्रक्रिया छ। जहाँ कार्यवाही वर्षौँसम्म गर्न सक्नुहुन्छ।
रूस मा सैन्य सेवाको लागि उमेर के हो? के सम्म उमेर मानिसहरू सैन्य दर्ता मा समावेश?
सम्पत्ति अधिकार को अवधारणा
मा झण्डा को राज्य छ सेतो अर्धचन्द्राकार र के यो मतलब?
भयानक expropriation। यो के हो?
गरिब परिवारमा कसरी बनाउने? कागजातहरू एउटा खाँचोमा परेका परिवारको स्थिति प्राप्त गर्न
उत्पादन, रगत thickening: मिठाई, तला खाद्य पदार्थ, लसुन, सलाद, रक्सी, nettle
वस्तु र विज्ञान को दर्शन विषय के हो?